Guddoomiyaha Degmada Cadale Oo Ku Dhaawacmay Qarax Lagula Beegsaday Duleedka Jowhar.
Saturday October 28, 2017 - 10:01:40 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay qarax duleedka magaalada Jowhar lagula beegsaday mas'uul sare oo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ee shisheeyaha la shaqeysa.
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 Askari ay ku dhinteen qarax loo adeegsaday Miino dhulka lagu aasay oo shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Garsaale oo kala qeybiya degmooyinka Balcad iyo Jowhar.
Qaraxa oo haleelay gaari qooqan ah waxaa ku dhaawacmay guddoomiyaha degmada Cadale ugu magacaabay dowladda Federaalka, ilo wareedyo ayaa sheegay in dhaawaca guddoomiyaha la dhigay isbitaal ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin duleedka Jowhar.
Ninka dhaawacmay oo ku magac dheer Muuse Yahuud ayaa ka amba baxay magaalada Jowhar wuxuuna kusii jeeday degmada Balcad oo uu ugasii gudbi lahaa degada Cadale ee uu guddoomiyaha ka yahay.
Saraakiil ku sugan magaalada Jowhar ayaa diiday in ay faah faahiyeen xaaladda caafimaad ee guddoomiye Muuse Yahuud, Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyadda qaraxa lagu beegsaday gaariga guddoomiyaha degmada Cadale.
Wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa qarka usaaran in ay ka xiranto isticmaalka saraakiisha DF-ka sababa xiriira weerarada ay fulinayaan dagaalyahanada Xarakada Al Shabaab oo kusii badanaya.